Shenzhen Klyde Electronics Co. , Ltd သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိ Car multimedia player ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ၁၀ နှစ်တီထွင်မှုပြီးနောက် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးယခုအခါတရုတ်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်း Car multimedia Palyer စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီsquareရိယာမှာ ၁၂၀၀၀ စတုရန်းမီတာရှိပြီး ၀ န်ထမ်း ၃၂၀ ခန့်ရှိသည်။ သုံးစွဲသူ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များကိုအမြဲတိုးတက်စေပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်သောအတွေ့အကြုံရှိ R&D အင်ဂျင်နီယာနှင့်နည်းပညာရှင် ၄၃ ခုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လစဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည်ယူနစ် ၃၇၀၀၀ ဖြစ်သည်။ Car multimedia player၊ ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင် ၁၀ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသော car multimedia Player အပါအ ၀ င်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ဂျပန်၊ ရုရှား၊ ယူကရိန်း၊ တူရကီ၊ စပိန်၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ အီရန်၊ ပါကစ္စတန်၊ ဒူဘိုင်း၊ အစ္စရေး၊ ကိုရီးယား၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ ဘရာဇီး၊
ယခုမော်ဒယ် ၆၀၀ ကျော်ကို BMW စီးရီး / Benz စီးရီးအပါအ ၀ င်မော်တော်ယဉ်မီဒီယာဖွင့်စက်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
Audi စီးရီး / VW စီးရီး / Opel စီးရီး / Renault စီးရီး / ဟွန်ဒါစီးရီး / Toyota စီးရီး / ဆူဇူကီးစီးရီး / Mazda စီးရီး / Isuzu စီးရီး / Peugeot စီးရီး / Ford စီးရီး / Citroen စီးရီး / Kia စီးရီး / Hyundai စီးရီးနှင့်အခြားမော်ဒယ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာအနှံ့အတွက် ဖောက်သည်များ ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ပလက်ဖောင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မာလ်တီမီဒီယာပလေယာအားလုံးတည်ငြိမ်။ မြန်ဆန်သည်။ ? အရည်အသွေးကိုအာမခံနိုင်ရန်ထုတ်ကုန်အားလုံးတွင် CE / FCC / ROHS / E-MARK အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားသည်။ အရည်အသွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပါ!
ကားစက်ရုံ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် IATF 16949: 2016 ကိုလွန်ခဲ့သည်။
နှစ်များကြီးထွားလာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကားအမျိုးအစားအားလုံးအတွက်ကားအသံနှင့်လုံခြုံရေးတပ်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရာတွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသောကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတိုင်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်မြင့်မားသောစံနှုန်းသို့ပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွမ်းကျင်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ကြသည်။
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား : Manufacturer
ကုန်ပစ္စည်း Range : Other Auto Electronics , Other Auto Electronics
ထုတ်ကုန် / ဝန်ဆောင်မှု : Car DVD ပလေယာများ , Car Stereo , Car multimedia player , Car GPS navigation , ကားအသံ , ကားရေဒီယို
စုစုပေါငျးန်ထမ်း : 201~500
မြို့တော် (သန်းကိုအမေရိကန် $) : US$2000000
တစ်နှစ်တာတည်ထောင်သည် : 2008
လက်မှတ် : CE , ISO/TS16949 , FCC , FDA , RoHS , Test Report
ကုမ္ပဏီလိပ်စာ : Building C&D, Zunlong Hi-Tech Science Park, Xieping Rd., Wulian, Longgang Dist.,, Shenzhen, Guangdong, China
နှစ်ပတ်လည်အရောင်း Volume ကို (သန်းကိုအမေရိကန် $) : US$10 Million - US$50 Million
နှစ်စဉ်အရစ်ကျ Volume ကို (သန်းကိုအမေရိကန် $) : US$10 Million - US$50 Million
ပို့ကုန်ရာခိုင်နှုန်း : 81% - 90%
အဓိကစျေးကွက်များ : Americas , Asia , East Europe , Europe , Middle East , Worldwide
QC န်ထမ်းများ၏အမှတ် :31 -40 People
စက်ရုံ Size ကို (Sq.meters) :5,000-10,000 square meters
စက်ရုံတည်နေရာ :Building C&D, Zunlong Hi-Tech Science Park, Xieping Rd., Wulian, Longgang Dist., Shenzhen, Guangdong, China